स्वास्थ्य(Health) in Nepalese Women: All about women in Nepal -
असार ५, कैलाली । कैलालीको गौरीगंगा नगरपालिकाले नगरभित्रका गर्भवती र सुत्केरी महिलाहरुलाई निशुल्क एम्बुलेन्स् उपलब्ध गराउने भएको छ । गौरी गंगा नगरपालिकाका प्रमुख भीम देउवाले आ।ब। २०७६/०७७ को नीति कार्यक्रम सम्बन्धमा सुझाब संकलन तथा अन्तरक्रिया कार्यक्रममा यस्तो बताएका हुन् । उनले नगरपालिकामा तीन वटा एम्बुलेन्स् खरिद गरेको बताउँदै एउटा एम्बुलेन्स सुत्केरी महिलाहरुकै लागि खरिद गरेको बताए । ‘सुत्केरी ब्यथा लागेका महिलाहरुलाई तुरुन्त अस्पताल पुर्याउन सजिलो होस्, उपचार अभावमा शिशु र आमा दुबैको ज्यान जोखिममा नपरोस् भन्ने उद्देश्यले नीतिगत रुपमै यस्तो...
सानीमाया मुखियाको डिम्बाशयमा चार केजीको ट्यूमर
►विष्णुप्रसाद पोखरेल चैत २४, दमक । झापाको दमकस्थित लाइफलाइन अस्पतालमा एक अपाङ्गता भएकी महिलाको डिम्बाशयमा रहेको ४ केजी तौलको ट्युमर निकालिएको अस्पतालले जनाएको छ । बोल्न नसक्ने पाँचथरको मिक्लाजुङ ४ की सानीमाया मुखियाको डिम्बाशयमा रहेको ट्यूमर बढ्दै गएपछि यो अवस्था आएको उपचारमा संलग्न महिला रोग विशेषज्ञ डा. सीता राईले बताइन् । बिरामीका आफन्तले बताएअनुसार खान अरुची हुने, दुख्ने, लगायतका समस्याहरु सांकेतिक रुपमा बताउन थालेपछि जाँच गर्दा ट्युमर रहेको पाइएको थियो । उनको पेट पनि फुलेको थियो । शल्यक्रिया गरेर निकालिएको ट्यूमर सानो ट्यूमरहरु औषधि...
चैत १७, मियामी (एएफपी) – अमेरिकी राज्य जर्जियाका गभर्नरले भ्रुणको “मुटुको चाल” थाहा भएपछि गर्भपतन गराउन निषेध गर्नेसम्बन्धी एउटा नयाँ कानुनमा हस्ताक्षर गर्ने तयारी गर्नुभएको छ । स्थानीय सयमअनुसार शुक्रबार भएको संसद तल्लो सदनमा भएको मतदानमा सांसदहरुले नयाँ कानुन पारित गरेका थिए । अमेरिकी हलिउडका कलाकारहरुले गभर्नरको उक्त कदमका विरुद्ध आन्दोलन गर्ने चेतावनी दिएका छन् । संयुक्तराज्य अमेरिकामा केही वर्षदेखि गर्भपतनको विषयले राजनीतिक रुप लिएको छ । केही अमेरिकी राज्यहरुले गर्भपतनलाई सीमित गर्ने प्रयास पनि गरेका छन् । गर्भपतनको पक्ष र विपक्षमा...
उपचारपछि नयाँ जीवन पाइन् ५६ वर्षीया महामती साउदले
►विमलबहादुर विष्ट चैत ७, डोटी । दीपायल सिलगढी नगरपालिका– २ खातिवाडाकी ५६ वर्षीया महामती साउद नयाँ जीवन पाएर आजभोलि निकै खुशी हुनुहुन्छ । उहाँका श्रीमान् भागीको ज्यान पनि अहिले हलुङ्गो भएको छ । उहाँ शैलेश्वरी अस्पताल दीपायल पिपल्लाका डा जेपी गुप्तालाई दिनहुँ आर्शीवाद दिइरहनु हुन्छ । “डा गुप्ताले दिएको नया“ जीवन पाएकी छु“, मलाई बहुला भन्नेहरु आजभोलि गाली गर्दैनन् होला नि रु” उहाँले भन्नुभयो – “अब त म पागल छैन नि है ।” झण्डै बाह्र वर्ष मानसिक रुपमा प्रताडित महामती उपचार पछि स्वस्थ हुनुभएको छ । उहाँ पहिला रातभर बर्बराउने, कराउने, ढ�...
'निःशुल्क बाँड्नुपर्छ स्यानिटरी प्याड'
►रीता लामा फागुन २२, घोराही । पुरुषको आवश्यकतासँग जोडिएको कण्डम निःशुल्क हुने तर, महिलाका लागि नभै नहुने स्यानिटरी प्याड किन निःशुल्क नहुने ? अहिले यो विषयले चर्चा पाएको छ । धेरैजसो अधिकारकर्मी तथा नारी समानताका लागि काम गर्दैआएका सङ्घसंस्थाले यो विषयलाई महत्वका साथ उठाइरहेका छन् । एक महिलाले किशोरी अवस्थामा प्रवेश (११ देखि १५ वर्ष) गरेदेखि करीब ५०/५२ वर्षको उमेरसम्म मासिक धर्म अर्थात् महिनावारीलाई बेहोर्नुपर्छ । खर्चकै हिसाबले पनि यो महङ्गो पर्छ । वर्षभरि खानै नपुग्ने दुर्गम भेगका महिलाले जे गरेर भए पनि यसको जोहो गर्नैपर्छ । दाङको ग्रामीण...